I-pre-eclampsia yabesifazane abakhulelweyo
I-Edema kwabasetyhini abakhulelweyo-into eqhelekileyo. Le meko ibangelwa ukuphulwa komgaqo wokususa umbane ukusuka emzimbeni kwaye kubonakala ngabafazi abakhulelweyo. Nangona kunjalo, umntu kufuneka acinge ngokucokisa, ukuba izandla, iinyawo, ubuso zivuvuka, ngokubhekiselele kwimvelaphi yentloko kunye noxinzelelo lwegazi oluphezulu. Ukuba unempawu ezinjalo, kufuneka udibane nodokotela, njengoko banokubonisa ukuphuhliswa kwegestosis. Inkxalabo ye-preeclampsia kunye ne-eclampsia yi-preeclampsia.
I-pre-eclampsia yabasetyhini abakhulelweyo, iimpawu zazo, ngaphezu kokuzikhukhumeza: uxinzelelo oluphezulu lwegazi kunye nokufunyanwa kweprotheni emcanjeni, zifumaneka rhoqo kwisiqingatha sesibini sokukhulelwa, ngamanye amaxesha ngamaxesha angaphambili.
Ukongezelela kule miqondiso, kukho iimpawu ze-pre-eclampsia:
ukwanda ngokukhawuleza kwindleko, ngenxa yokuphulwa kwemisebenzi yamalungu enoxanduva lokususa umbane ukusuka emzimbeni;
intlungu ephezulu esiswini;
ezintle iintloko, isisu esinomxholo wesixinzelelo segazi, ingxaki yombono - isimo sengqondo "inkungu emehlweni";
kuncipha kwixesha lokuvuthwa kunye nomthamo womchamo;
isicupunu kunye nokuhlanza.
Xa kubonakala le miqondiso, kubalulekile ukuba ufune unyango ngokukhawuleza kwaye uncedo lokuqala lwexesha lokuqala ngaphambi kwe-eclampsia.
Inkathalo engxamisekileyo ye-pre-eclampsia ngaphambi kokufika kwe-ambulensi:
kwisisongelo sokuxinwa, ukubeka isigulane ekamelweni elimnyama, kungabandakanyi ingxolo, ubeke umlotha phantsi kwentloko yakhe;
faka phakathi kwamazinyo i-spoon okanye intambo ukuze isigulane singalumali ulwimi lwakhe ngexesha leenkampu, qi ni sekise ukuba le nto ayihambeli kwaye ingangeni kwi-airways;
kunye nokungaphefumli okwexesha elide (i-apnea) ukwenza ukuphefumula okufakelwayo;
Ukunciphisa uxinzelelo lwegazi ngaphakathi okanye nge-intramuscularly nge-drug antihypertensive substance (Relanium, Sedusen okanye abanye).
I-pre-eclampsia ngexesha lokukhulelwa lijongene neengxaki ezinobungozi bokusebenza kwesibindi, amazinga okwandisa ama-enzymes e-hepatic kunye neqondo eliphantsi leeplatelet (ukuphazamiseka kwegazi). Ingozi yomntwana kukuphulwa kwegazi kwi-placenta, eya kuchaphazela kakubi ukuphuhliswa komntwana.
I-pre-eclampsia yabasetyhini abakhulelweyo bangakhokelela ekuzalweni kwangaphambi kokuzalwa, okudla rhoqo kunye ne-fetal pathologies ezifana nokukhubazeka kwe-cerebral, ukuhluthwa, kunye nokubonakala okungekhoyo.
Bobabini abakhulelweyo nabasetyuleni bungozi buninzi bombuso we-preeclampsia kwi-eclampsia, ehambelana nokunyuka okukrakra kwexinzelelo lwegazi, kwaze kwaba sekuqaleni kokuxinwa. I-Eclampsia yinto ephezulu ye-preeclampsia eyenzeka xa unyango olungenangqondo okanye ukungabikho kwonyango olwaneleyo. Imiqondiso yayo, ngaphezu kweempawu eziphambili ze-pre-eclampsia, zixubusha, mhlawumbi i-coma kunye nesiphumo esibulalayo kumama nomntwana. I-preeclampsia ekhulayo inokuphuhlisa kokubili ngexesha lokukhulelwa, ngexesha lokubanjwa kunye nasekupheleni.
Ukunyangwa kwe-preeclampsia yee-degrees ezahlukeneyo
I-Preeclampsia kunye ne-eclampsia ziphathwa ngendlela ephela-ukuzalwa komntwana. Ngendlela ephezulu ye-pre-eclampsia, unyango lunokufuna ukuhanjiswa kwangangoko, kungakhathaliseki ukuba ubude bexesha, kuba kunokukhokelela ekufeni komfazi okhulelweyo ukuba uyalibaziseka.
I-preeclampsia yesiganga esiphakathi xa usongela ukubeleka kwangaphambi kokubeleka uphathwe esibhedlele ngempilo kunye nokulawulwa kwegazi nge-biochemistry, i-ultrasound kunye ne-cardiotocography yomntwana ekukhuliseni ukukhulelwa. Ukuba ixesha likufutshane nokubeleka kwaye uxinzelelo lwegazi aluqinisekanga, ukuzalwa kuza kuvuselela okanye kwenziwe isigaba sokugcina.
I-preeclampsia elula ibonwa esibhedlele ngokusebenza okuncinci kwemoto. Ukukhanya kuthathwa njengesimo xa Uxinzelelo lwe-arterial kwi-140 ukuya kwi-90 mm Hg, inani elincinane leprotheni kumchamo.
Ukutyelela rhoqo ugqirha, ukulawula ubunzima, uxinzelelo lwegazi, ukuvuthwa kwegazi rhoqo yizona zinto ziyinxalenye yokuthintela i-gestosis. Okubaluleke kakhulu ukukhusela i-preeclampsia kunye ne-eclampsia kubasetyhini abanesifo sikashukela, i-kidney pathologies, ukugqithisa ngokweqile, abaye bafumana le meko, ekubeni le nkalo yezigulane ineyona nto ibonisa ukuphuhliswa kwe-gestosis yabesifazane abakhulelweyo.
Ubungakanani bemfuyo yeeveki - itafile
I-Aching kwisisu esingaphantsi kwexesha lokukhulelwa
I-rhinitis ye-allergen ekukhulelweni
Luhlobo luni lweempawu ezinokukhulelwa?
I-Rhinonorm - imiyalelo yokusetyenziswa xa ukhulelwa
Ukufakelwa kwesibindi kubakho nini emva kokuvuthwa?
Ihla nini isisu ngaphambi kokubeletha ozelwe kuqala?
I-Ultrasound kwiiveki ezingama-33 zokukhulelwa - okuqhelekileyo
Iiveki ezingama-20 zokubeleka - zingaphi kangakanani iintsana kufuneka zihambe?
Imivalo ye-Varicose ngexesha lokukhulelwa
Ingxabano yeRh phakathi koomama kunye nomntwana
Inkcazo yokukhulelwa nge-iodine
Umbala wezinwele zeBeige
Izangqa eziphuzi phantsi kwamehlo
Indlela yokulungisa i-escalope?
I-pie ekhawulezayo kunye neerriesries
Kutheni ungabi namaphupha?
Inkwenkwezi yochungechunge elithi "iKonard" uClaire Foy watsho ngomyeni wakhe umzabalazo nesifo esibi
I-endometrioid ye-ovarian cyst treatment ngaphandle kokuhlinzwa
Indlela yokukhetha iindlobhinqa zabafazi abakhulelweyo?
UWilliam Wood watshilo malunga nabahamba ngezinyawo baseHollywood
Isipho sokuqala kwintombazana
Izipho ezingavamile zomtshato
Ukuhla kokugqibela: izilwanyana ngaphambi kokuba emva kokuhlamba
ITavegil okanye i-Suprastin?
Kutheni icawa iphupha?
Yintoni enokuyifumana evela kuSochi?
Stopudovo uthando: 30 izibini eziqhelekileyo zothando!
I-Pasta eneenkukhu - iindlela eziphambili zokupheka kwezidlo ezidumile zaseNtaliyane
Euphorbia - ukunakekelwa ekhaya